Potato juice - ikhambi ecebile yezinto zemvelo. It has a nethonya elihle isimiso sokugaya ukudla bungene, aqede ukuhlaselwa acute nge izilonda. Nge ngenhloso yokwelapha kungcono ukusebenzisa nezilimo eziyizigaxa abasha izinhlobo abomvu. Kulokhu, ukusetshenziswa kuwufanele fresh amazambane juice. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka kuncike ekuvuthweni yemifino. Akumele isetshenziselwe ekwelapheni amazambane ovuthiwe oluhlaza, ngoba ingaqukatha ezinobuthi.
Ayikanye simnandi kakhulu amazambane juice. Izinzuzo futhi ukunambitheka kuthiwa, ngeshwa, asikwazi kuhlanganiswe. Ngakho-ke kungcono ke ixubene nezinye imifino. Uyini ezinhle isiphuzo enjalo? Okokuqala, lokhu zemifino ngokwayo inomsoco kakhulu futhi siyagwinyeka kalula ngokwanele, ngakho-ke kufanelekile bonke ubudala. It has sine antispasmodic, umphumela isisu. Okwesibili, kuyasiza igazi. Potato juice kuyinto "umphakeli" emzimbeni-folic acid, i-iron, okuyizinto ezidingekayo ukuze ukukhiqizwa egcwele amangqamuzana abomvu egazi. Okwesithathu, rheumatism, samathambo, Izifo ukuvuvukala amalunga omzimba kuyoba okuningi ngokushesha, njengoba nosawoti wamaminerali organic, okuyindawo ehlanganisa yemifino, iyasiza. Nokho, kudingeka alungiselele kahle amazambane juice. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka yezenzo zayo kuye ngokuthi usunesikhathi esingakanani ukugcina nezilimo eziyizigaxa ngoba ngaphansi kwesikhumba nokwakha izinto eziyingozi - solanine. Ngakho-ke kudingekile ukuhlanza nezilimo eziyizigaxa kahle futhi usebenzise kuphela phakathi.
Indlela ukulungiselela amazambane juice?
Mhlawumbe ngamunye wethu waphawula ngokushesha kangakanani blackens amazambane eluhlaza ngaphansi ukuchayeka emoyeni. Ngokuvamile ayinalo imizuzu eyishumi ukuqinisekisa ukuthi zonke izakhi ewusizo aguqule ibe engenamsebenzi. Ngakho-ke kungcono ukusebenzisa juicer ukuze uthole juice amazambane. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka kulesi simo incike, njengoba sibona emazwini akhe isivinini ukupheka. Ngaphezu kwalokho, baphuze isiphuzo kusukela Julayi kuphela Februwari, kwesinye izinyanga kuba langakufanelekela ukusetshenziswa ngaphakathi bonke ngoba solanine.
Imithetho ezisiza balisebenzise kangcono amazambane juice
Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka isiphuzo kuxhomeke endleleni ncamashi ukulandela imithetho ethile. Ngokwesibonelo, ngaphambi kokuba kuqale ukusetshenziswa kwaso, kuyadingeka izinsuku ezimbalwa ukuze ihambisane ukudla zemifino. Futhi mhlawumbe aze ngisho ukudla Ukudla okuluhlaza. Cishe izinsuku ezintathu kuwufanele kusihlwa ukwenza i enema ukuhlanzwa. Phakathi nale nkathi, kufanele ayeke okubabayo, okubabayo, ukudla okunosawoti.
Potato juice: Izimo
Uma umuntu asidi ongaphakeme, uzwakalise ukusabela ane-alikhali, kungcono ukulahla lokhu indlela yokwelashwa. esibi sikashukela nazo contraindicated. Ngaphezu kwalokho, kutuswa ukuba bangalisebenzisi kabi lokhu juice ngenxa engayitholi yayo okuqhubekayo in inqwaba kungabangela ukulimala kwamanyikwe.
Kunoma ikuphi, ngaphambi kokuba uqale ukwelashwa amazambane juice, qiniseka bonana nodokotela wakho kuqala.
Isikhombi amnandi clover uju? izakhiwo ezisebenzisekayo amakhemikhali ukwakheka
Amakhambi. Ukwelapha izindawo Hypericum kanye contraindications
Izimbali Linden - isicelo ekwelapheni
Yikuphi bathembele izinzuzo kanye nezibonelelo ukuba omama abangashadile
Thassos Isiqhingi (Greece) - omunye ethandwa kakhulu iholidi izindawo enyakatho yezwe